चुनावमा मधेसका महिलाको यो हबिगत देखिदैछ ! « Surya Khabar
चुनावमा मधेसका महिलाको यो हबिगत देखिदैछ !
धनुषा । मधेसका महिलाले अहिले पनि पतिले भनेकै ठाउँमा भोट हाल्ने गरेका छन् । मधेसका महिला घरभित्रै बस्ने र बाहिर निस्के पनि घुम्टो ओढ्ने गर्दा उम्मेदवारले पनि पुरुष सदस्यलाई नै भेटेर आफ्ना एजेन्डा बुझाउने गर्छन् । महिला मतदातासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी आफ्ना एजेन्डाबारे बुझाउनसमेत उम्मेदवारलाई वातावरण छैन ।
बुहारीले ससुरा, जेठान र छिमेकी पुरुषसँग संवाद नगर्ने परम्परा अहिले पनि मधेसमा छ । सोही परम्पराकै कारण उम्मेदवार आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा मत माग्न सक्दैनन् ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका–२० देवपुराकी ६५ वर्षीय सोनावतीदेवी दास दलका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि थमाएर गएको पर्चा हेर्दै गरेको भेटिइन् । लेखपढ गर्न नजान्ने दासलाई पर्चामा रहेका उम्मेदवारको तस्बिर र चुनाव चिह्नले मात्रै आकर्षित गरेको देखिन्थ्यो ।
शुक्रबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, चुनाव केका लागि हो ? के फाइदा हुन्छ जस्ता विषयमा अनभिज्ञ दास श्रीमान् र छोराले भनेकै ठाउँमा भोट खसाल्ने सोचमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई को दल, को उम्मेदवार थाहा छैन । घरका मालिकले जहाँ भन्छन् त्यहीँ भोट हाल्छौं ।’